tanjona (tsy) nangalarina tao amin'ny rink! | Holmbygden.se
← Teo aloha Manaraka →
tanjona (tsy) nangalarina tao amin'ny rink!
Posted on 10 Janoary, 2014 ny Holmbygden.se
Teo am-piandrasana ny ranomandry rink tokony menamenan'ny izao ny uppskottad rink ao Am-piangonana tanteraka Bay amin'ny ranomandry!
Ny tanjona izao dia ireo indray! Soa ihany, tsy mbola nangalarina, fa indraindray nindramina eo ambany maso toe-javatra.
Ny iray amin'ny Anund målburarna Sekoly Manor Toa efa nangalatra! Ity vaovao mampalahelo hita omaly nandritra ny fitsidihany tao amin'ny sekoly. Ihany no iray amin'ireo cages, tamin'ny ambony, avy eo ankavia. Tsy misy miresaka momba akaiky kokoa rehefa nanjavona, fa ny tena mety vao haingana tamin'ny Desambra-Janoary.
Misy iza no mahalala na inona na inona momba izany?!
Comment eto ambany na hifandray aminay!
Sundsvall Monisipaly tsy kabone bebe kokoa amin'ny Holm
Ny taona hafa dia naka tsy nampahafantatra Sundsvall Monisipaly olona nesorina tampoka rink I Anundgård. Toa nila izany bebe kokoa any an-kafa. Tamin'ny taon-dasa, fa tsy izy ireo kabone misy ranomandry, fa rehefa fanerena avy amin'ny #ShepherdsHut nataony izany ihany.
Tamin'ity taona ity, ny kaominina indray dia tsy nikasa ny handamina ny ranomandry rink in Holm mihitsy. HBU ankehitriny indray mandeha indray teo amin'ny Sundsvall mifandray amin'ny kaominina, ary nilaza fa mihevitra fa tsinontsinona ambany fa tokony ihany koa nikapa izany aminay. Tax vola na dia ny mponina sy Holm dia zara raha misy mandiso fanantenana ny fanompoana tsy toa hiverina any ambanivohitra.
HBU ankehitriny vahaolana ifanarahana ity. Tsy ny tsipiriany nofantsihana, fa fohy, izany dia midika fa ny kaominina no miantoka fa, fara fahakeliny, ho vonona ranomandry. Ary ny tenanay dia tsy maintsy hitandrina izany mihazakazaka. Ny vahaolana izay tsy ilaina ao amin'ny toerana hafa ao amin'ny kaominina, fa toa ny tena ilàna ny mahazo fotsiny ny ranomandry menamenan'ny. Ny rink ela dia hanomboka hanondrahana!
Maro noho ny HBU ny mpikambana izay ho azo atao ny rink amin'ny ririnina!
Avy eo ny fikambanana dia tsy maintsy mampihatra ny mamela ny ho amin'ny fikojakojana ny rink, dia tsy maintsy manaiky ny mpikambana eo amin'ny fampiharana. Noho izany, dia afaka mampiseho ny zavatra maro Holmbor dia ao ambadiky ny fangatahana mba manana ranomandry rink in Holm. HBU azy te hilaza misaotra anao lehibe amin'ny olona rehetra izay vao niditra ho HBU ho avy 2014 ary tamin'izany andro izany dia ahafahantsika manana ranomandry rink amin'ity taona ity!
Support rink sy HBU anao! Hahafantatra bebe kokoa momba lasa mpikambana ao amin'ny HBU ho iray ihany femtiolapp.
(“Join Ankehitriny” amin'ny fotoam- “fifandraisana” ao amin'ny sakafo.)
Rink Disco koa 2014?
HBU drafitra mba hamerina tamin'ny taona lasa malaza hetsika miaraka amin'ny ranomandry-Disco ririnina ity. mety ho nanaraka “Pub hariva” amin'ny trubadur-Mike. Izahay dia hiverina amin'ny fanazavana fanampiny momba izany. Vakio sy jereo tsara sary avy amin'ny tamin'ny taona lasa ranomandry-Disco
Ity teny ity dia nampakarina tao News ny Holmbygden.se. tsoratadidy ny permalink.